Dee Maka Anyị na Enyemaka | Otu Di na Nwunye
Mmasị ịghọ a onye inyeaka n'ihi na Otu Di na Nwunye?
Anyị na-achọ mgbe niile ndị na-ede blọgụ ga-achọ inye ha ahụmịhe na ịkọrọ ha akụkọ! Anyị na-emeghe ka anyị na ndị njem nwere mmasị na-agwa ndị nwere ike igosipụta onwe ha, ha bụ ndị ọkachamara n'isiokwu ha chọrọ ide banyere.
Biko mara na anyị Anabatakwa ajụjụ maka ajụjụ azụmahịa ma ọ bụ njikọ. Idenye aha anyị nke anyị bụ naanị maka ibe blọgụ, onye anyi nwere obi uto inyere aka inweta visibiliti.
Otu esi eme:
Nyefee mmasị gị n'ụdị kọntaktị dị n'okpuru.
Anyị na-anabata nnyefe nke okwu 1,000 kachasị dị na ya ọrụ mbụ.
Anyị na-arịọ ka iwepụta foto ị nwere ikike iwu iji. N’aka ozo, ejiri igwefoto gi were zụta, ma obu nweta ya site na Creative Commons / Pixabay, Pexels, wdg ...
Photos ga bụrụ ebe ọdịda mbara-karịa ederede.
Anyị ga-achọ otu nnukwu foto foto, ma ọ dịkarịa ala otu foto maka okwu 250 ọ bụla. (N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị chọrọ foto anọ maka okwu 1,000 post).
Ọ bụrụ na ịnweghị foto, ọ bụghị onye na-agbaji. Anyị nwere ike ejikarị agbakwunye foto ọ bụla achọrọ.
Mkpuchi ndị ọzọ:
Anyị debere ikike iji dezie ihe edere n'ịtọzi njehie ma ọ bụ nhazi usoro.
Otú ọ dị, anyị ga-, Otú ọ dị, mgbe gbanwee iguzosi ike n'ezi ihe nke ibe.
Ị na-ekwe ka nkwalite ọ bụla ọzọ nke mpempe akwụkwọ ahụ, ọ bụrụhaala na ekwuru gị dị ka onye edemede (ntụgharị mgbasa ozi, mmekọ mmekọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, wdg ...).
Ọ bụrụ n’uche na ị nwere ihe ịchọrọ ide ezigbo post ọbịa, kpọtụrụ anyị n’okpuru! Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ!
aha Biko tinye aha.